Crushဆီက Attention ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Chelmo News Portal
Home›Knowledge›Crushဆီက Attention ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ကိုယ်Crushနေတဲ့သူဆီက Attention ရအောင်လုပ်တာက ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ သူမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးပဲ မသိမသာခိုးကြိုက်နေမယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ သူပြန်ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ကသူနဲ့နီးစပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နော်။ အချို့လူတွေပြောသလိုပေါ့ Crush ကပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရသလို တကယ့်လက်တွေ့မှာလဲ ကိုယ့်Crushက ပြန်ကြိုက်လို့အဆင်ပြေသွားကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး Crushက ကိုယ့်ကိုသတိထားမိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကသာသူ့ကိုကြိုက်နေတာ သူကသင်ရှိနေမှန်းတောင်မသိရင် ဘာမှထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားပါ။ သင်နဲ့သိတဲ့သူက သူနဲ့လည်းခင်တယ်ဆို သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခိုင်းပါ။ ဒီနေရာမှာ သင်ကသူ့ကို ကြိုက်နေမှန်းမသိသာစေရပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း မိတ်ဆက်နေကြပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါစေ။ တကယ်လို့သင်ကြိုက်နေတဲ့သူက အတန်းထဲကဆို အကြောင်းတစ်ခုခုရှာပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။ အတန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ စာအကြောင်းမေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုအစဖော်ပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်က သိပေမယ့်မရင်းနှီးတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် အရင်ဆုံးရင်းနှီးအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုခေတ်မှာ FacebookမှာAddတာတို့၊ InstagramမှာFollowလုပ်တာတို့က မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကအရင်စAddလိုက်လို့ သူကတစ်မျိုးများထင်သွားမလားတွေ တွေးပြီးမAddပဲမနေပါနဲ့။ အပြင်မှာ အမြဲလိုလို တွေ့နေကျပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ခါတစ်လေမှတွေ့တာမျိုးပဲဖြစ်စေ၊ Onlineပေါ်မှာ အမြဲအစကားပြောလို့ရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ သူတင်တဲ့Postတွေဆို အကုန်လုံးကို React မပေးပါနဲ့ သူ့ပုံတင်တာတို့၊ ဟာသPostတွေတို့၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့Postတွေဆို ကိုယ်သိတဲ့ဟာမျိုးတွေပါရင် React ပေးပါ။ အကုန်လုံးကိုReactမပေးပေမယ့် သူတင်တာတွေတော့ ကိုယ်ကအကုန်သိနေပါစေနော်။ အဓိကက သူဘာတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ သူတင်တာတွေကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ သူ့My Dayတွေလည်း သင်ကအမြဲဝင်ကြည့်ပေးပါ။ အပြင်မှာတွေ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆို သူမြင်နိုင်လောက်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ သင်ရှိနေပေးပါ။ သင့်ကိုသူသတိထားမိအောင် နေပေးပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပုံစံက သူ့ကိုကြိုက်နေမှန်း မသိသာပါစေနဲ့နော်။
အပြင်မှာတွေ့ရင်လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို စကားပြောပေးပါ။ သူ့My Dayတွေဆိုလည်း အမြဲဝင်ကြည့်ပြီး Replyပြန်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်က အကြိုက်တူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြောပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်း သူကသင့်ကိုသတိထားလာမိပြီဆို သင်နဲ့အမြဲလိုလို စကားပြောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ စကားပြောရင်း သူ့အကြိုက်တွေမေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။ ဥပမာ သူက သီချင်းဟောင်းလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့သူဆို သင်အခု အရင်က သီချင်းတွေနားထောင်ချင်လို့ရှာနေတာ နားထောင်လို့ကောင်းတာလေးတွေပြောပြပါဦးဆိုပြီး ပြောပါ။
ယောကျာ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဟာသလေးတွေပြောတတ်တဲ့သူဆို သဘောကျကြပါတယ်။ ဟာသပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင်တို့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုရီစရာတွေဖြစ်ဘူးတယ်တို့ပြောတာမျိုးပါ။ တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာပြီဆို သူ့ကိုစတာမျိုးတွေပြောပါ။ သင့်ရဲ့အဲ့လို ရီစရာပြောတတ်ပြီး စတတ်တာလေးက တဖြည်းဖြည်းသူ့အမြင်မှာ ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
သူကသင်နဲ့စကားပြောနေကြဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာပြီဆို သူ့အကြောင်းတွေ သင့်ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ကြရင် သင်ကသေချာလေးနာထောင်ပေးပါ။ တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင် သင့်ကို အဲ့လိုသူ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတာက သင်နဲ့စကားပြောနေရတာကြိုက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို သင်ကသူ့အတွက် တဖြည်းဖြည်းအရေးပါလာလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူကသင့်ကို သူ့အေကြာင်းတွေ ပြောပြနေပြီဆို သင့်အကြောင်းပါ ဆွဲထည့်ပြီးမပြောပါနဲ့ သူကမေးရင်တောင် သင့်အကြောင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးမပြောပဲ သူ့အကြောင်းကို ဦးစားပေးပြီးနားထောင်ပေးပါ။
နောက်ပိုင်းတွေတဖြည်းဖြည်း သင်တို့နှစ်ယောက်ပိုပြီးရင်းနှီးလာပြီဆို Date ကြည့်တဲ့အဆင့်ထိတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အရမ်းသဘောကျတဲ့သူရှိရင် ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
A သွေးအမျိုးတွေ STAY HOME ဖြစ်ရင် ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ။
“ကိုယ့်မှာရှိသမျှ အရာအားလုံးပုံအောပြီး မင်းဆီပြေးလာခဲ့မယ်’’ ဆိုတဲ့ Xiao Zhan နဲ့ Ace Troops ရိုက်ကူးရေးအပြီး သူ့ရဲ့ နှုတ်ဆက်စကား